Mampahatsiahy an'i Keliberano | Hevitra MPANOHARIANA
faly mahafantatra an'i Keliberano lol
Nampidirin'i sazykely @ 12:14, 2008-01-31 [Valio]
Mivoatra i Madagasikara ... Isan'ny "fivoarana" daholo izany.
Nampidirin'i pissoa @ 18:31, 2008-01-31 [Valio]
Hay ve ka misy tantara ohatra izany ry jentilisa! Misaotra nampahalala e
Nampidirin'i Tokinao @ 19:38, 2008-01-31 [Valio]
ririnin-dasa tsy tsaroana ny ahy, fa toa tsisy tohiny intsony ny fitadidiako ny raharahan'i Keliberano - na izaho no tsy nanaraka intsony nony avy teo - fa toa samy vitavita tamin'izao (toy ny mahazatra rehefa misy ambonimbony voarohirohy...)
Nampidirin'i ikalamako @ 20:05, 2008-01-31 [Valio]
ary noheveriko ho vao haingana iny raharahan'i keliberano iny. dia efa miha-soara mihitsy izany !
tsy kely làlana ny ratsy...
Nampidirin'i Rajiosy @ 22:06, 2008-01-31 [Valio]